Uwe a na-ahụkarị nke Peru, gịnị bụ okpu Peruvian? | Akụkọ Njem
Susana Maria Urbano Mateos | | America, Ebe njegharị
A na-amata mba site na ala ya, egwu ya, egwu ya, agba ya, ndị ya na, n'enweghị obi abụọ, uwe ya. Uwe abụghị naanị akụkụ nke ọgbọ ma ọ bụ oge, ọ bụkwa akụkụ nke otu mba ma ọ bụ mpaghara. El okpu peruvian bụ ihe atụ doro anya banyere ya.
Peru bụ mba nwere ọtụtụ mpaghara, yana ememme a na-apụghị ịgụta ọnụ, ọ bụ mba nke ndị ya dị ụtọ mix nke Efrata na agbụrụ, Obodo ọ bụla nwere njirimara nke ya mana na-efunahụ ngwakọta nke agba na ụtọ ya. Ihe niile na-egosi na ọ bụghị naanị na nri ha, kamakwa na uwe nke obodo ọ bụla na ememme ya. Ka anyị matakwuo banyere Peruvian hat na uwe Peruvian.
A na-eji ejiji nke ugwu mara agba nke uwe mwụda ha na ponchos, ọkachasị na ngalaba nke Arequipa, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Puno na n'etiti obodo ndị ọzọ dị n'ugwu, ọ bụ ezie na ụdị uwe dị iche iche nwere ihe na-egosipụta ha nhata, ha nke ajị anụ vicuña ma ọ bụ ụfọdụ nke auquénids mara mma nke ugwu anyị nwere, iji kpuchido ndị bi na mpaghara a nke Peru site na oyi ha na-eyi chullo, nke dị ka okpu ajị anụ na-ekpuchi ntị. Ndị na-agba egwú Scissor na-eji enyo chọọ uwe ha mma ma na-ese chi ha n'azụ.
Na ụsọ oké osimiri, o ji owu mee poncho ya na sket ya, obu ezie na igba egwu marinera, ejiri silk dochie anya umu nwanyi. Uwe ụmụ nwoke na-eyikarị okpu ejiri ahịhịa kpuchie ha ka anwụ ghara ịda.
N'ime oke ohia, ndi nwoke na ndi nwanyi nke agburu ụfọdụ na-eyi uwe a na-adụ ha n'akụkụ ma jiri ihe oyiyi geometric na dyes na ha chọọ., a na-akpọ uwe ahụ dị ka cushma.
Nke a bụ mkpirikpi iwebata banyere uwe ndị Peruvian, mana ugbu a, achọrọ m ịmatakwu banyere isiokwu a ka ị wee mara nke ọma ihe ọ bụ.
1 Ndị Peru bụ ndị ọrụ aka
2 Obere akụkọ banyere Peru
3 Uwe nwoke na Peru
4 Uwe ụmụ nwanyị Peruvian
5 Okpu okpu nke Peruvian
5.6 Na-ahapụ ya
Ndị Peru bụ ndị ọrụ aka
Ndị Peruvian bụ ndị omenkà mara mma, uwe ha bụ nke eji ụlọ rụọ ugbu a na narị afọ nke XNUMX a ma nwee ekele maka ya dịka ọ bụ uwe ọdịnala eji ọtụtụ narị afọ gara aga. Na Peru ndị bi na ya na-eyi akwa poncho, akwa, akwa mkpuchi, sọsọ mmiri, sketị achara, ajị anụ, okpu, chullos na ụdị uwe ndị ọzọ.. Ekike ọdịnala nke Peru dị ezigbo mma ma na-enwu gbaa, ọ mara mma ma dịkwa ezigbo mma ọ bụ ezie na uwe ndị ahụ mara ezigbo mma. Ndị njem nleta na-enwe mmasị na ịma mma nke uwe eji aka mee ma ha na-ewere uwe ncheta mgbe niile na ahịa Peruvian, ọ bụghịkwa ihe ijuanya!
Obere akụkọ banyere Peru
Peru nwere ogologo akụkọ ihe mere eme na ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị. Obodo Spen meriri obodo a na narị afọ nke XNUMX. Ndị mmeri nke Spanish metụtara ọdịbendị ndị Peruvian mana ndị ya jisiri ike chekwa ọdịbendị ha site na ọdịnala, omenaala na nkwenkwe ha.
Otu njirimara bụ isi nke mba a bụ na ndị Peru bụ ndị ọrụ aka mara mma. A na-asọpụrụ ngwaahịa ya na mba ndị ọzọ. Onye ọ bụla na-eme njem nleta na-enwe mmasị n’ịma mma nke uwe ndị e mepụtara n’ógbè ha ma na-achọ ịzụ ihe n’ahịa ndị mara mma dị na Peruvian.
Uwe nke Peru nwere njirimara mara mma dịka nke a na-ekpo ọkụ (n'ihi na Andes ọ bụ oyi ma ha nwere ihu igwe na-agbanwe agbanwe n'ime afọ niile) ọ bụkwa arụrụ n'ụlọ. Isi ihe eji eme akwa bụ alpaca ajị. Tụkwasị na nke ahụ, uwe ndị ahụ nwere ụkpụrụ geometric na agba agba na-eme ka ha bụrụ ihe pụrụ iche na nke a na-apụghị ịkọgharị.
Uwe nwoke na Peru
Menmụ nwoke na-eyikarị uwe mpempe akwụkwọ n'ụdị diamond, nke bụ poncho nke nwere agba na-acha ọkụ ma dị ezigbo ọkụ. Ọ bụ ibe buru ibu nke nwere oghere n'etiti iji tinye isi ya. E nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche (ọ dabere na mpaghara ahụ) ma a na-eji ha dabere na nzube ha. Ọ bụ ezie na e nwere ụmụ nwoke ndị na-eji ya eme ihe kwa ụbọchị, ihe a na-emebu bụ iji ya maka mmemme pụrụ iche.
Buru n'uche na ụmụ nwoke nọ na Peru na-eyi okpu nwere okpu pụrụ iche akpọrọ "centillo". Ha mara mma ma buru ezigbo oriri, ọ bụ ezie na okpu kachasị ewu ewu bụ chullo. The chullo bụ ihe ejiri aka mee, ejiri ya, tinye ya na ntị ya na tassels, ejiri alpaca, llama, vicuña ma ọ bụ ajị atụrụ mee ya.
Ogologo ọkpa ahụ dị mfe ma sweta nke ejiri alpaca, llama ma ọ bụ ajị atụrụ. Sweaters na-ekpo ọkụ ma na-enwekarị ihe ịchọ mma geometric na ụdị anụmanụ.
Uwe ụmụ nwanyị Peruvian
Akụkụ ndị bụ isi nke ụdị uwe ụmụ nwanyị mba a bụ: ponchos, uwe, akwa mkpuchi, sket, uwe na okpu. Uwe ọ bụla ma ọ bụ uwe ọ bụla dị iche iche site n'otu mpaghara gaa na nke ọzọ, n'ihi na n'ụzọ dị otú a, ha nwere ike igosipụta ọdịiche nke obodo ma ọ bụ obodo ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ndị mmadụ nwere ike ịmata ma nwanyị si n'obodo ma ọ bụ obodo site na ịlele okpu ya ma ọ bụ na o si n'ezinụlọ bara ọgaranya ma ọ bụ nke dara ogbenye.
Womenmụ nwanyị na-eyikarị uwe ubu, nke bụ akụkụ akụkụ anọ nke akwa aka. Ọ bụ ọdịnala ọdịnala ma tinye manda a n'ubu ma mee ka ọ ghara ịkwado ya site na ịgafe ya n'egedege ihu ma kpoo ya n'ihu akụkụ nke obi. Mụnwaanyị na-ejikwa barrettes ejiri mee nke a na-akpọ "tupu" ma ọ bụ tupo "ma a na-eji okwute mara mma chọọ ha mma. Taa ha na-ejikarị ịkwa osisi eme ihe. A na-akpọ akwa ubu ndị ụmụ nwanyị na-eji eme ihe: lliclla, k'eperina, awayu na unkuna ma ndị iche na-adị iche.
Llicla Ọ bụ akwa ụmụ nwoke na-akwa na-adị n’obodo n’obodo.
K'eperina Ọ bụ nnukwu ákwà a na-ejikarị ebu ụmụ ọhụrụ na ngwongwo ebuga ha n’otu ebe ruo ebe ọzọ.
Awayu O yiriri na lliclla mana o buru ibu ma buru uzo ma ejiri ya buru umu aka na ngwa ahia.
anwụ Ọ bụkwa akwa nke na-ebu obere ma pere mpe ma were ya buru nri.
A na-eyi sweta na jaketị n'okpuru akwa ubu. Sweaters na-abụkarị sịntetik na ọtụtụ agba. Ejiri akwa ajị anụ mee jaketị ndị a na-akpọ "juyuna" ma ha na-achọkarị ahụ nwanyị mma.
A na-akpọ uwe mwụda nke ụmụ nwanyị Peruvia "polleras" ma ọ bụ "melkkhay”A na-egbutu ha na otu agba agba akpọrọ“ puyto ”. A na-eji aka ajị anụ ejiri ha aka. A na-eyikarị ha ma na-eyi ha, na-agbanye ha nwere ike ịpụta dị ka puffy, ma n'ezie ha dị mma ma na-enwu gbaa.
Ma nwoke ma nwanyi jiri ajotas (akpụkpọ ụkwụ emere site na taya taya recycled) nke a na-eme n'ụlọ ma dị ọnụ ala.
Okpu okpu nke Peruvian
Okpu okpu nke PeruvianỌ bụ omenala ndị dọtara mmasị nke ndị bịara na mba ahụ ebe ọ bụ na ha nwere njimara pụrụ iche nke na-adọta uche nke ndị nwere mmasị na ha. Ọtụtụ mgbe, okpu atụmatụ ejiri ya, agba ma ọ bụ ụzọ e si mee ya jikọtara ya na ohere akụ na ụba, dịka o doro anya, omenala ndị a dịgasị iche na mpaghara, na mgbakwunye na okpu na-eme otu ụzọ ahụ, ebe ọ bụ na ha na-agbanwe dabere na mkpa nke ndi mpaghara.
Ugbu a, anyị ga-ekwu maka okpu kachasị dị na Peru.
Ndị a A na-eji okpo osisi mee okpu ndị na-edo onwe ha n'okpuru anyanwụ siri ike ruo ogologo oge, nke mere na ha nabatara agba ọcha, wee gaa n'ihu inye ya ọdịdị nke kwuru A na-achọkarị okpu ndị Peruvian na eriri ojii.
Aha ya sitere na Pirua, nke bụ ebe a na-ejikarị ya eme ihe n'ihi ọmarịcha ụsọ ugwu ugwu.
Ọ bụ Okpu Peruvian maka iji ọdịnala, nke umu nwanyi na-ejikarị maka oge ememe, di obere ma nwee obere komoma. Ha na-eji okooko osisi ma ọ bụ ihe ndị ọzọ mara mma chọọ ya mma n’anya. E ji ajị atụrụ mee ya.
Na Quispillata, ụmụ okorobịa na-ejikarị ya eme ihe n’enweghị ịchọ mma, ma ọ bụ n’oge oyi.
N'ebe a, a na-eke okpu ụdị ahụ n'etiti ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị.
Ndị ikom ahụ, ha ga-ahụkarị yi okpu eji ajị anụ ajị atụrụ mee, nke a na-eji na Sọnde; maka ezumike, a na-agbanwe ihe ndị a ebe a ga-eweli nku n'egedege ihu, na mgbakwunye na iji ifuru chọọ ya mma
Womenmụ nwanyị n'aka nke ọzọ, ha na-ebu ya agba aja aja, isi awọ ma ọ bụ okpu ojii, nke a ga-eji ajị anụ ajị atụrụ mee. Mụ agbọghọ ndị na-alụbeghị di na-achọkarị okpu ndị a jiri okooko osisi mara mma ma ụfọdụ na-eji ezigbo okooko osisi.
N'ebe a, okpu kachasị mkpa bụ ndị ahụ ha nwere iko di ala, nke a ga-eji ajị anụ ajị atụrụ mee. Nke na-ejigide isi awọ, oji, ocher na oji. Kedu nke a ga-eji rịbọn chọọ ha mma.
Mụ nwanyị na-eyi uwe okpu ejiri ajị anụ na okporo ọka, nke a na-eji ribbons chọọ ya mma ma a ga-esiri ha ike mepụta rosettes (ribbons).
Mụ nwoke, n'adịghị ka ụmụ nwanyị, ga-enwe okpu nwere ike iji ihe dị iche iche mee, otu n'ime ha bụ ajị anụ na ahịhịa, nke ọzọ bụ ajị atụrụ atụrụ, nke nwere ike ịcha awọ. A ga-eji ụdọ ajị dị iche iche chọọ ha mma.
Na mpaghara a nke nnukwu ndị ọrụ ugbo mara. Ihe okpu ga-ebu ụzọ na nke a ga-abụ ndị ejiri eriri akwukwo nri mee: Nkwu, rosh na shawl.
N'ebe a, enwere ike iche ndị isi, ebe ọ bụ na onye nwere ikike na ndị ọrụ ga-agakarị ịnyịnya, na mgbakwunye na ịkpa okpu mara mma nke nwere oke obosara, nke a ga-eji nkwụ rụọ.
Na Mpaghara Moquegua, ejiri mara uwe Maka ịbụ otu n'ime ihe izizi na ngosipụta, na mpaghara a okpu nwere ike iji ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke mee ihe, nke okpu eji eji okooko osisi chọọ ya mma yana nkewa ndị a na-agbaso, ga-eji mee ememme.
Peru bụ ebe bara ọgaranya na ọdịbendị, ma ka oge na-aga, akụkọ ọdịnala ya belatara, nke mere ka imepụta uwe ya belata, mana ekele maka ọdịnala ndị ka gbanyere mkpọrọgwụ na ndị ya, a na-akọrọ ha ma kụziere ha ihe nye ọgbọ ọhụrụ. Obi abụọ adịghị ya, okpu ndị Peruvian bụ ndị na-apụta maka ọdịdị na ịma mma ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Ahụkarị Akwa nke Peru
Ọ ga-amasị m ịmatakwu banyere aha uwe ọ bụla wdg
Uwe ejiji ndị Peruvians abụghị akwa dị mfe, ha bụ ọdịbendị na-esochi egwu, ịgba egwu, nnọkọ ezinụlọ, wdg. n'ime ezinụlọ ọ bụla na otu mmekọrịta na mba ndị a. E nwere akụkọ dum n'azụ agba ọ bụla. B LR!!
Cheregodi, achọrọ m ịma ụdị uwe nwanyị Ayacuchan na-akwọ ụgbọ mmiri, ọkachasị olu na n'ihi akwa mkpuchi anaghị ekwe ka m hụ ma ọ bụ olu ma ọ bụ akụkụ. I meela nke ukwuu, a na m eche enyemaka gị ma a na m arịọ ya ọsọ ọsọ.